Joogista Cali Xaaji ee Xamar, ma loo xaglin karaa xil-ka-raadin federaalka ah? – Radio Daljir
Joogista Cali Xaaji ee Xamar, ma loo xaglin karaa xil-ka-raadin federaalka ah?
Febraayo 15, 2017 5:53 g 0
Muqdisho, 15 Feb 2017 – Siyaasi Cali Xaaji Warsame oo ka mid ahaa musharraxiintii ka qaybgalay tartankii doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee siddeedii bishaan dhacday, ayaa weli ku sugan magaalada Muqdisho oo xilligaan uu ka socdo galaangal siyaasadeed oo xooggan, lana xiriira magacaabista R/wasaaraha cusub iyo golaha xukuumadeed ee uu soo dhisi doono.
Cali Xaaji Warsame, ayaa ka mid noqday siyaasiyiin iyo musharraxiin uu la kulmay madaxweynaha cusub ee la doortay Maxamed Cllaahi Farmaajo, kuwaasi uu madaxweynaha u gudbiya talooyin la xiriira xaaladda dalka iyo dadka Soomaaliyeed, siiba qaababkii dawladda cusub u wajihi lahayd arrimaha dalka oo amniga iyo abaaraha dabadheeraaday ay ka mid yihiin.
Wareysi gaar ah oo Cali Xaaji uu siiyey Radio Daljir, ayuu uga hadlay joogistiisa Muqdisho iyo arrimaha ay la xiriirto, isagoo dhinaca kalena muujiyey qorshihiisa siyaasadeed ee mustaqbalka iyo haatan in uu xil-doonis u joogo Xamar iyo in kale.
DHEGEYSO-Cabsi soo food saartay shacabka degmada Caluula iyo baddii oo magaalada soo gashay.